‘कम्युनिस्ट र योगगुरु उस्तै’ - संवाद - नेपाल
१२ वर्ष कतारको कर्पोरेट जगतमा बिताए, दीपक भेटवालले । उपल्लै पदमा थिए । आम्दानी रोजेखोजेजस्तै थियो । तर तनाव अन्तहीन । त्यसले उनलाई अन्ततः कर्पोरेट भ्रमको जंगलबाट आनन्दको मार्गमा हुत्याइदियो र अहिले ललितपुर, कुसुन्तीमा नेपाल योग स्कुलमार्फत विद्यालयमा योग फैलाउने अभियानमा छन् ।
योग स्कुल किन ?
योगका दुई पक्ष छन्, आध्यात्मिक र चिकित्सकीय (विज्ञान) । नेपालमा आध्यात्मिक र धार्मिक पक्षबाट मात्रै योग अभ्यास भइरहेको छ । तर हामीले योगको विज्ञानलाई समाजमा स्थापित गर्नमा जोड दिएका छौँ ।
विद्यालयलाई योगसँग किन जोड्ने ?
तीन वर्षको उमेरमै स्कुल हाल्ने चलनले बालबालिका मानसिक दबाबमा छन् । उनीहरुसित आनन्द लिने समय नै छैन । सिकाइ र मस्तिष्कलाई जोड्ने भएकाले योगले शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउँछ । योगले शरीर र संवेदनाको सन्तुलित विकास गराउँछ ।
योगले सिकाइ प्रक्रियामा कसरी सघाउँछ ?
शिक्षक स्कुलका बोस हुन् । बोससँग विद्यार्थी डराउँछ । भयका कारण तनाव आउँछ । भयभीत मस्तिष्कले सिक्न सक्दैन । धेरै घन्टा पढाउँदा विद्यार्थीले धेरै बुझ्छन् भन्ने भ्रम छ । तर बालमस्तिस्कलाई तयार गरिँदैन ।
योगमा त्यस्तो के तागत छ ?
मनपर्ने मानिससँग जति घन्टा गफिए पनि हामी थाक्दैनौँ । जस्तो, तीन घन्टा फिल्म हेर्दा थकान लाग्दैन । तर अरु काम दुईतीन घन्टा काम गर्दा थाक्छौँ किनभने काम गर्दा चेतन र अर्धचेतन दुवै मस्तिस्क एकसाथ चलिरहेको हुन्छ । योगले यी दुवै मस्तिस्कलाई जोडिदिन्छ । कर्म र चेतनालाई जोड्नु योग हो ।
योगमार्गमा पहिल्यैदेखिको रुचि हो ?
म त कम्युनिस्ट स्कुलिङको मानिस । कतारमा कर्पोरेट जीवनको जंगलमा थिएँ । आज यहाँ, भोलि कुन देशमा भन्ने थाहा थिएन । तनावका कारण एक वर्ष मेडिकल औषधी खाँदा पनि बिसेक भएन । तर योगले ठीक गर्‍यो । अनि भ्रामक दुनिया छोडेर यता लागेँ ।
कर्पोरेट दुनियाँ भ्रम रहेछ ?
प्रतिस्पर्धाको भ्रममा दौडँदा यति पाउँछु अनि खुसी हुन्छु भन्ने लाग्छ । त्यहाँ पुग्यो, फेरि पर पुग्न मन लाग्छ । कति पाएपछि वा केके भएर सन्तुष्टि पाउने ? लोभ अन्त्यहीन छ ।
योगलाई पनि कर्पोरेट शैलीमै बेच्नु विरोधाभास भएन ?
यसको स्वरुप कर्पोरेट छ । तर उद्देश्य कर्पोरेट छैन । सामान्य शैलीमा काम गर्दा समाजले पत्याउँदैन । त्यसैले कर्पोरेट स्वरुप दिनु परेको हो ।
भारतीय ‘बाबा’ हरुको जस्तै कर्पोरेट प्रभाव त होइन ?
हामी योग मात्र सिकाउँछौँ, वस्तु बेच्दैनौँ । यसको आम्दानी योगकै अनुसन्धानमा लगाउँछौँ ।
योग उपचारको अचुक औषधी रहेछ ?
नसर्ने रोग शरीरको गडबडीका कारण लाग्छ । त्यसलाई सन्तुलित बनाएर योगले प्रभावकारी उपचार गर्दो रहेछ । सरुवा र आकस्मिक रोगमा योगको पूर्ण भर पर्नु हुँदैन ।
योगको आध्यामिकभन्दा चिकित्सकीय पद्धति रोज्नुको कारण ?
अध्यात्म सर्वोत्तम मार्ग हो तर यसलाई धार्मिक र कर्मकाण्डी बनाए, अहिलेका योगगुरुले । यो खानुहुन्छ, यो हुँदैन, यो गर्नुहुन्छ, यो हुँदैन । जबर्जस्ती अनुशासनमा राख्ने । योगले स्वजागरण बनाउने हो, बलजफ्ती होइन । चरणबद्ध होसमा आएपछि उसैले छुट्याउँछ गर्न हुने र नहुने । कसैले कसैलाई योगी बनाउने होइन, आफैँ हुने हो ।
धेरैले नबुझी योग गर्ने/गराइरहेका छन् नि ?
कम्युनिस्ट र अहिलेका योगगुरु उस्तै लाग्छन् । कम्युनिस्टले सिकाउँछन्– यस्तो खानु हुँदैन, उस्तो लाउनु हुँदैन, लायो–खायो भने बुर्जुवा भइन्छ । मार्क्सले जीवनलाई पहिलो र भौतिक वस्तुलाई दोस्रो कुरा भनेका छन् । तर नेपालका कम्युनिस्टले भौतिक वस्तु पहिले अनि जीवन भने । योगी, संन्यासीले पनि त्यही ढंगले व्याख्या गरे । जब मानिसले ज्ञानलाई धर्मका रुपमा आत्मसात गर्छ, तब ऊ अन्धभक्त बन्छ । ज्ञान लिने र बुझ्ने प्रक्रियामा गडबडी छ ।
ट्याग: ११ प्रश्नयोग